SingForYou.net - Ko Paing Tae Ko Nay Yar
Tags : ကြင်နာသူ မင်းရင်မှာ .....ရှိသေးလားချစ်သူရာ........အမြဲတမ်းပဲနားခိုဖို့........စိုးရိမ်တယ်ပျောက်ကွယ်မှာ...........ကိုယ်ပိုင်တဲ့ ကိုယ့်နေရာ....ဘယ်သူ့ကိုမှ မပေးနိုင်...... (မပေးဘူးနော်.... ပေးဘူးဆို ပေးဘူးပဲ...ဟဟဟဟ)
By : myobala on Jan 7, 2010
Score: 105 Rating: 5.00 Comments: 32
Ko Paing Tae Ko Nay Yar's Description
ကြင်နာသူ မင်းရင်မှာ .....ရှိသေးလားချစ်သူရာ........အမြဲတမ်းပဲနားခိုဖို့........စိုးရိမ်တယ်ပျောက်ကွယ်မှာ...........ကိုယ်ပိုင်တဲ့ ကိုယ့်နေရာ....ဘယ်သူ့ကိုမှ မပေးနိုင်...... (မပေးဘူးနော်.... ပေးဘူးဆို ပေးဘူးပဲ...ဟဟဟဟ)
sarmari30 on Feb 17, 2012 0
eieithwe on Aug 6, 2011 0
nahyone on Dec 30, 2010 0
ဘရိုကလည်းမပေးဘူးဆိုတာကြီးပဲ..ဇွတ်..း)rnညီလေးလာအားပေးသွားတယ် ဘရိုရေ ။ ****** for Bro
some-body on Nov 12, 2010 0
kg ma kg :PrnShin phone yea Koko so dar..
kaungkinmyo on Sep 12, 2010 0
lovercreater on Jan 10, 2010 0
Ilovemusic on Jan 8, 2010 0
inn..soe yein sa yar pot byar.....khu khit ka...bar mha...yone ya ter hote woo...a he he... (good shal g bel....so twar ter..thate thate kg....bravooo...5*4u bro yay.)
moeluu on Jan 8, 2010 0
Cool.. it'sagood one.. carry on! *& cheers!
ဆိုထားတာ အရမ်းကောင်းတယ် bro! **********************
nay yar htway amyarr gyi par.....ko bala gyi ka gee myarr nay tar koe.....mite tal byoooo so htar tar......******
wow !!! really good.., arr pay twer per tal5**** for u
တော်တော်လေးစားသွားပီ အဟီး သချင်ပေါင်းမြောက်မြားစွာကိုရပီ ဘယ်သချင်းဖြစ်ဖြစ်ဆိုနိုင်တာကို အားပေးသွားပါတယ်နော် ခြူးလမ်းကြုံရင်မေးလိမ့်မယ် ရှိမရှိကို အဟီးးး
အစ်ကိုရေ.. မတွေ့တာတောင် ကြာပြီနော်.. အသံအရမ်းကောင်းလာတယ်အစ်ကိုရေ.. သီချင်းလေးက အရမ်းနားထောင်လို့ ကောင်းတယ်ဗျာ.. ခံစားချက်ပါပါတော့.. အားပေးသွားပါတယ်.. 5********* ခင်မင်လျှက်.. ကောင်းထက်
pp01 on Jan 7, 2010 0
You ka, Ta kal ta kal tawt..ko paing tae nay yar ko pay chin nay tar par..wote tal ma hote lar?? Gyee mhar nay tar..:D kg tal.ta myo pawt:D*****
greenlay on Jan 7, 2010 0
ကိုယ်ပိုင်တဲ့ ကိုယ့်နေရာမှာပဲနေပါ ကိုမျိုးကြီးရာ ... သူ့ဆီမှာ မရှိတော့ဘူးတဲ့ :P ၊ ကောင်းတယ်ဗျို့ *****
soethuwin on Jan 7, 2010 0
kg par tal .arr pay nal par tal pyar
braveboy on Jan 7, 2010 0
Moe-Z-lay on Jan 7, 2010 0
ကိုမျိူး ဦးထားတဲ့ဂူလား ..ရှိတယ်လေ...လာမလုပါဘူး...ပူနဲ့နော..ရှင်းတော့မရှင်းထားဘူး..လင်းနို့တွေအောင်းလောက်တယ်..ကြွိကြွိ..ဟားဟား..ကောင်းတယ်ကိုမျိုး..ဟို..နေရာကိုအမြဲတမ်းပိုင်နိုင်ပါစေ..*********
မိုးလေးအစ်ကိုက ရုပ်လေးနဲ့လုပ်စားနေတာ..အဲ ဟုတ်ပါဘူး ရုပ်လေးနဲ့ သီချင်းဆိုထားတာ အရမ်းမိုက်တယ်...အားကျတယ်...ဟီး..အားပေးနေတယ်နော်....******************** foru...
koaungkhaing on Jan 7, 2010 0
ညီဗလရဲ့ အသံနဲ့ဆိုဟန်က သူများနဲ့လုံးဝ မတူ တမူထူးခြား ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်.. ဗရာဗို......
philtre on Jan 7, 2010 0
အင်္ကျီချွတ် ဆီလူးပြီး... အဆီဗူးတွေ ထုတ်ပြမဲ့ဗားရှင်း ဘယ်တော့ကြည့်ရမှာလဲဟင်... မျှော်လင့်စောင့်စားရသူမှာ ရင်မောလှပါဘီ ကိုရယ်... သွပ်ပြားကို ရင်ခုန်အောင် အိမ်မက်တွေပေးခဲ့တဲ့ ကိုကိုလူဆိုး အင်္ဂုလိဗလ.. တော့်အဆီဗူးတွေ ညံညံထုတ်ပြပါအုံးတော်.. ရင်သပ်ရှုမော... ကြည့်ချင်ဇောနဲ့... ထုတ်ပြောမိရှာ... သွပ်ခမျာ...... ခစ် ... ခစ်.. ကွန်မန့်ရေးတာ အရစ်ရှည်တာနဲ့ အဆုံးထိအောင် နားထောင်ဖြစ်သွားတယ်... ဟိဟိ
ဒီ ၀က်ဆိုဒ် ပိုင်ရှင်က ခင်ဗျားလိုဂေးမဟုတ်တော့ ခက်နေတယ်ဗျ......မတော်လို့ အဘန်းခံနေရ ရင်ဒုက္ခ........ခင်ဗျားကိုယ်တိုင်ထောင်တဲ့ ဆိုဒ်ကျမှပဲ အဲလို ဆိုပြတော့မယ်ဗျာ.......နော်...ဟိဟိဟိဟိ...
bar so so kg par tel .... narsin arr pay thwar par tel .... bro gyi yay ..... 5* :)))))
tharnge123 on Jan 7, 2010 0
Bro gyi ko taw lay sar tal byar, A kone ya tal. A yan kaung tal bro yay. Arr pay thwar par tal bya.*********************************************
လေးစားရင် ငါးပြန်တာပေါ့ ခြောက်လျှော်မယ်နော်......ဟဟဟဟ...ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာကိုသားငယ်ရေ............
bro gyi yay.....8 ma ya te' nya twe myar nay pyi htin tal......hehee...pin pan nay te' pone paut nay tal.....male song twe so sa yar ma shi dort buu htin pa...ha ha.......very nice par byarrrrrrr..************
ဗလမင်းထင်ကို နှမက ဗျင်းချင်နေပုံရတယ်.. မိန်းခလေးသီချင်းဆိုလို့ ဂေးလိုလိုဆိုလိုချင်တာလား.. ၀င်းဦးနဲ့က ဗလသာ တူတာပါ... စိတ်မတူပါဘူး.. အစစ်ကြီးပါ.. လူပြိုကြီးဖြစ်တာကလွဲလို့..ခစ်...ခစ်... မယုံဘူးလား.. သွပ်ဗလကို.. ဇွတ်ပြခိုင်းလိုက်မယ် (ဗလထုတ်ပြခိုင်းမယ်ပြောတာ) ဟိဟိ... :D
ဟာ....ရွှေမင်းသမီးလေးကလည်း တယ်ခက်သကိုး....အလွမ်းသီချင်းဆိုပါတယ် ဆိုမှ သွားကြီးဖြဲပြီးဆို ပြရမလိုဖစ်နေပြီ.....ဟဟဟဟ..ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော့.......
sandy12 on Jan 7, 2010 0
tichin ko sa sone nar htaung twar tal naw n first comment n votes to u....good sings.....arr pay hwar tal naw....5*****4u.....
forevermoe on Jan 7, 2010 0
ko g myooo vote lo ya tot buuuuuu..nyi ma lay arr pay twer par tal norr ...so htar tar good tal ..ta kal khan sar pyi so nay tar pop layy ..ko pg tae ko nay yar thu mha pay nae norr ..thein htarr..no ko g ..:P